RWBY's Toxic Fandom, na Mgbagha igbu onwe ya - Ndị Ọzọ
RWBY's Toxic Fandom, Na Mgbagha nke igbu onwe (Ka anyị kpochapụ ihe ụfọdụ)
Companylọ ọrụ Mecha dabere na UK, ya mere ọ dị ihe dịka 9:50 AM ka m na-ede ihe a.
Mgbe ndị mmadụ na-ekwu RWBY’s anime fandom na-egbu egbu ha anaghị agha ụgha. Ọ B is n'ezie na-egbu egbu fanbase.
Ọ dịka ọ bụ n’abalị ụnyaahụ, LOT nke ihe nkiri agbasaala ka e bipụtasịrị akụkọ banyere ya echiche igbu nwa agbọghọ metụtara njikọ RWBY.
Olee otu o si bido
E si na ya nweta ozi a Hero Hey si Ọwa YouTube, ebe o kwuru maka otu ihe ahụ.
na-egosi dị ka ịhụnanya na franxx
Enwere ozi taa banyere otu nwa agbọghọ, Cleo, onye boro ndụ ya na mkpagbu sitere na #RWBY obodo. Nke a bụ blog na-atụle ihe merenụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ ya ma mepụta echiche gị. https://t.co/oKvNbQ5EbC
Daalụ @OgbakoUmuIgbo maka ịkekọrịta nke a
- HeroHei (@_Nke_u_aghachi) Ọnwa Iri na Otu 6, 2019
Otutu ihe omuma a gbakoro na post nke ụnyaahụ ka anakwara site na akaụntụ umuaka umuaka 'Tumblr', Twitter ya, na otutu tweets ndi ozo na-ekwu banyere otu ihe.
Nke abụọ: igbu onwe, mmekọrịta dị n'etiti afọ.
hey @RosterTeeth , gị rwby fandom etinyela aka na nwa agbọghọ igbu onwe ya ugbu a maka ụgbọ mmiri 'na-ekwesịghị ekwesị,' biko anyị nwere ike ịnweta ụfọdụ ntinye n'aka ụmụ gị? ala nke fndm a eruola oke. https://t.co/iL3ggXD981
- adam stannie (@nwachukwu) Ọnwa Iri na Otu 6, 2019
Dị ka ị pụrụ ịhụ site n'elu oyiyi nke nwa agbọghọ bidoro esemokwu a, ọ kpochapụrụ akaụntụ ya.
eme igwe dị ka gị onwe gị na-atụ egwu
RWBY igbu onwe ya bụ ihe niile gbasara HOAX
Ọ rụrụ ọrụ xp
Ha mere edemede banyere ya, nke achọrọ ka emelite ya ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ya ugbu a https://t.co/c7qeU5nHHz
- Ebuka (@ Memeka1) Ọnwa Iri na Otu 7, 2019
Onwere onye kwesiri ijide ndi a ma mee ka ha mata na obu okwu ojoo https://t.co/9sxB6BX9i6
--LastSuperSaiyan & # x1f41d; & # x1f41d; & # x1f5a4; & # x1f49b; Oghenefejiren (@ fenusi.agha) Ọnwa Iri na Otu 7, 2019
EZI nke tweets bịara idei mmiri banyere ihe niile bụ ụgha. Ma ọ bụ ndị ọzọ okwu - ka agba RWBYS si egbu egbu.
Na-egbu egbu n'ezie na ha dị njikere ịbịaru ebe a nanị iji zere ndị ọzọ nọ n'obodo ahụ.
Ọbụna ozi ịntanetị banyere RWBY igbu onwe onye hoax malitere ịbịaru
Dị ka ọ na-ekwu:
“Nde, m ga-achọ ikwu na nke a ekwenyela na ọ bụ ụgha. Enwere ọtụtụ posts nke akaebe na Cleo adịghịdị adị.
Dị ka onye n'ezie furu efu ezi ndị enyi igbu onwe ya na onye lanarịrị m nke a were m iwe ịhụ ọ bụ adịgboroja. Ee iji ike emegbu mmadụ bụ okwu na nnukwu ihe na - akpata ihe dị ka nke a mana onye a mepụtara ans Foto zụrụ akwụkwọ izizi m hụrụ.
Otu onye ahụ na-eziga onye a nwere aha 4 dị iche iche ma ọ bụ karịa. Enwere ederede 2 zuru ezu gbasara nchọpụta akaebe ndị a. Naanị m chọrọ itinye nke a na nke a bụ aghụghọ. “
kedu ihe kacha mma oge niile
Ihe mere m jiri kpesa akụkọ a na mbụ
ọ bụ WELL ederede ka RWBY’s anime fandom bụ na-egbu egbu karịa nkwenye.
Ọtụtụ ndị mmadụ apụtala na Twitter na-ekwu maka ya. Ọbụna ndị mmadụ na ụlọ ọrụ n'onwe ya.
Nyaahụ na November 6th, E bipụtara mpempe akụkọ 3:
22 Anime Egwuregwu Anime A Na-ewu ewu Na Mgbụsị akwụkwọ 2019 (Ndị Japan gụrụ)
Anụmanụ Kyoto na-ekenye Obi Victkụda Obi Maka Ndị Sọpụrụ (Emume Ncheta)
Nwatakịrị nwanyị Egburu Onwe Ya Mgbe Emechara Ya Ike Site RWBY Fanbase (Akụkọ Ọjọọ)
Ọ bụ ụbọchị “nkịtị”. Echere m n'ụzọ omume na ọ bụ nri ihe ị ga-eme ịkekọrịta akụkọ banyere ihe akpọrọ 'igbu onwe'.
Mana o doro anya na nke ahụ bụ nnukwu ndudue
Nwata nwanyi bidoro ihe niile a di ala karie sh * t. Karịsịa mgbe m maara n'onwe olee otú igbu onwe onye jọruru njọ na otu o si emetụta onye ọ bụla ejikọtara na onye ahụ.
A na m ekwu okwu n'eziokwu na otu esi eji nyiwe dị ka Twitter maka nzuzu sh * t dị ka nke a, ihe niile maka ego ego.
RWBY’S na-egbu egbu fanbase bụ maka ezigbo.
Na-ehichapụ nke a site na ịza nke a RIDICULOUS tweet:
Yo @_Oke_Hei. Otu obere nnụnụ gwara m na a kwụrụ gị ego ọbara https://t.co/4k1wkHugMz imepụta hoax banyere adịgboroja igbu onwe ya maka nwa agbọghọ adịgboroja aha ya bụ Cleo ka ị nwee ike ime ka ndị na-ebu ya buru ihe ọjọọ ma nwetakwuo echiche maka ọwa gị. Nlekọta ịza Dramaalert knockoff?
- onyinyechi (@ egbe15) Ọnwa Iri na Otu 7, 2019
Nke mbu ka m kwuo - Amaghịdị m Hero Hei n'onwe.
NA O nweghị njikọ na Mecha Company ọ bụla.
Amaara m onye ọ bụ na ihe ọ na-eme, mana echiche nke 'a kwụrụ gị ego ọbara iji mepụta hoax' bụ oke bullsh * t.
ihe kacha mma anime niile
Onye ọ bụla na-eso ụlọ ọrụ Mecha ma ọ bụ mụ onwe m maara na nke a abụghị ụdị ihe ị ga-ahụ.
A na-ewepụta mpempe akwụkwọ akụkọ ọ bụla, ọ nweghịkwa onye na-akwụ ụgwọ sh * iji bipụta akụkọ na saịtị a.
Ọ bụ ezie na anaghị m ahụ Hero Hei ka ọ na-eme ụdị vidiyo a 'mee ka ndị na-ebu ya yie ihe ọjọọ' ma (echeghị m).
Nke ọ bụla…
Nke ahụ agaghị eme ebe a na enweghị.
Na na kwuru - nke a bụ ihe mmụta mụtara
Ekele dịrị onye ọ bụla gbasapụrụ ma kwuo maka ya.
Anime yiri mere na abis
UK na-ehi ụra n'oge ahụ, ma ọ dịkarịa ala, edozila ya ugbu a ma dinara.
Mmegharị Kyoto Ga-eji $ 10.1 Nde Dollar Enyemaka Iji Nyere Ndị Aka Mbibi Aka
7 Ofdị Fans nke Na-eme Anime Community TOXIC
Anime na-eme ihe ọchị nke anime
Anime nwere ike karịrị nke mmadụ na ndụ ụlọ akwụkwọ
ga-ekiri oge niile